Sheekada filimka Gold: Akshay wuxuu la yimid fariin adag guul weyna laga filan karo – Filimside.net
Sheekada filimka Gold: Akshay wuxuu la yimid fariin adag guul weyna laga filan karo
August 15, 2018 Zakarie Abdi
Taariikhda: August 15, 2018
Bollywood King Kumar Aka Akshay Kumar waxaa tiyaatarada loo saaray filimka sida weyn loo wada sugaayay Gold ee fariinta wadaninimo xambaarsan laguna aadiyay daawashadiisa maalinta xurnimada Hindiya (15 Aug 2018).
Jilaayaasha Gold: Akshay Kumar, Kunal Kapoor, Amit Sadh, Vineet Kumar Singh, Sunny Kaushal, Mouni Roy
Qiimeynta fariinta filimkan: 4/5 (Afar xidig)
Muxuu ku wanaagsan Gold: Wajiyada kala duwan ee Akshay Kumar matalaayo, fariintiisa adag, qiirada wadaninimo iyo sida cajiibka badan ee uu filimkan kusoo idlaanayo.
Muxuu ku liitaa Gold: Xoogaa qaybta dambe filimkan sheekadiisa gaabis yar ayaa ka muuqdo sidoo kalena fariintiisa hab mada daalo dhameestiran ah looma dhigin.
Sheekada Filimka Gold Oo Kooban: Filimkan wuxuu ka hadlayaa sida Hindiya ugu guuleesteen biladoodii dahabka ugu horeesay cayaaraha Olympicada aduunka ayagoo weliba ku hoos jireen mustacamaradii Ingiriiska.
Tapan Das (Akshay Kumar) wuxuu ahaa macalinka dhalinyarada xulka Hindiya ee tartankii Olympicada aduunka 1936 magaalada Berlin dalka Jarmalka kaga qaadeen bilada dahabka ah cayaarta Hockey-ga.
Balse Hindiya markaas xur ma ahayn waxayna ku hoos jireen gumeysigii Ingiriiska sidaa darteed markii biladaha dahabka ay Berlin ku qaadeen dhamaadkii cayaarta waxaa la daraayaa astaanta calanka Ingiriiska dabaal daga oo socdo balse Tapan Das (Akshay Kumar) wuxuu dareemayaa in dadkiisa iyo dadaalkoodiiba la bahdilay wuxuuna wacad ku maraa Hindiya oo xur ah inuu bilad dahab ah u qaado cayaaraha Olympicada.
Balse nasiib xumo waxaa bilaabanay dagaalkii labaad ee aduunka kaasi oo sababay inaan la qabanin Olymopicada aduunka sanadaha 1940 iyo 1944.
Markii dagaalka labaad aduunka dhamaadi sanadii 1945 waxaa sanadii 1946 lagu dhawaaqaa in cayaaryaha Olympikada dib loo soo celiyay sidoo kalena 1948 lagu qaban doono magaalada London.
Waxaa soo dhow xiligii Hindiya xurnimada ka qaadan laheyd Ingiriiska sidoo kalena Tapan Das (Akshay Kumar) wuxuu ku farxaa in dib loo soo celiyay cayaaraha Olympicada aduunka.
Tapan Das (Akshay Kumar) nolosha wuu ka dhacsan yahay niyad jab awgeed qamriga ayuu saaxiib la noqday waxaana lagu leeyahay lacag fara badan.
Laakiin Tapan Das (Akshay Kumar) xiriirka cayaaraha Hindiya ayuu ka dhaadhicinaa madaxdooda in isaga loo dhiibo maamulka kooxda Hockey-ga Hindiya u matalayaan 1948 cayaaraha Olmypicada waana laga aqbalaa.
Tapan Das (Akshay Kumar) wuxuu bilaabaa inuu isku soo aruuriyo kooxdii Hindiya u qaadeen biladii dahabka 1936 balse wuxuu fashil kala kulmaa kabtankii kooxdaas Samrat (Kunal Kapoor) oo ka diidayo inuu cayaaraha kusoo laabto balse wuxuu siinaa talooyin wanaagsan oo ka mid ah in Imtiaz Shah (Vineet Kumar Singh uu kabtan ka dhigto markaan.
Kadib Tapan Das (Akshay Kumar) gobolada Hindiya ayuu kusoo wareegaa wuxuuna kasoo helaa cayaartooy dareen wadaninimo leh kana go’antahay inay ku caawiyaan bilada cayaaraha Olympicada aduunka 1948 qaybta Hocky-ga ah wiilasha caawinayaana waxaa ka mid ah Himmat Singh (Sunny Kaushal) iyo Raghubir Pratap Singh (Amit Sadh).
Macalin Tapan Das (Akshay Kumar) oo wax walbo u hagaagsan yihiin sidoo kalena soona dhow dahay qabashada cayaaraha Olympicada aduunka 1948 ayaa lagu dhawaaqaa go’aankii mashaqada badan dhaliyay ee ahaa in Hindiya la kala qeybinaayo qayb Pakistan noqoneyso qaybna Hindiya taasi oo sababeyso in cayaartooydiisa xitaa qadiyadan saameyso.
Macalin Tapan Das (Akshay Kumar) wuxuu xidigahiisa London u safrinaa ayadoo Hindiya weli gumeysiga Ingiriiska ku hoos jirto sidoo kalena dalka labo loo kala qeybin rabo dhibataas ayadoo heesato cayaartooydiisa ayay hadana taariikh lixaad leh sameenayaan soona qaadayaan biladii dahabka Hockey-ga waxayna dalka kusoo laabanayaan ayagoo geesiyaal qaran ah!
Fariinta Filimkd Gold Maxaa Laga Yiri: Gabadha filimkan sameesay Reema Kagti amaan lixaad leh ayay mudan tahay sida ay u dooratay fariin qiiro badan leh sidoo kalena adag waxayna isugu daba riday si wacan oo ay ku mudan tahay in abaal marin lagu siiyo.
Kaliya waxaa wanaagsaneyd in qaybaha dhextaalka marka la gaaro xoogaa fariinta inay sii yara adkaato waayo halka saac oo hore inaba caadi ma ahan balse dhaliisha yar waxaa lagu hilmaami karaa sida xamaasada iyo qiirada badan ee filimka Gold ku dhamaanayo.
Bandhiga Jilaayaasha: Akshay Kumar waa in laga leexdaa mana jiro Superstar maanta isaga la mid ah oo fariin walbo tijaaban karo waayo filimka Gold Akki waji cusub ayuu ku matalay wuxuuna u matalay si Classic ah.
Haddii aad Gold daawatid makala dooran kartid wajiga Akshay midka wanaagsan kan macalinka ah ee xanuunka badan qalbiga ku heesto, macalinka cayaartooydiisa jecel inuu isku keeno, macalinka gumeysi diidka ah iyo macalinka guusha jecel, macalinka dadka u shactireeyo waxaaba kasii daran sida uu nin qoys u yahay una jecel yahay xaaskiisa Mouni Roy oo marwalbo garab taagan.
Mouni Roy (Monobina) door adag oo qof walbo dareemi karo ayaa la siiyay ayadoo Akshay xaaskiisa ku jileyso marwalbana garabka uu u baahan siineyso, kaliya waxaa niyad jab ah in waqti ahaan doorkeeda yar yahay oo aysan shaashada ku badneyd.
Kunal Kapoor doorkiisa waa heer sare balse ma ahan door waqti badan filimkan ku leh, balse Amit Sadh wuxuu la yimid qaa jiliin cajiib badan iyo door amaan lixaad leh uu ku heli doono sida uu cayaaryahan Hockey-ga cayaaro u matalo.
Sunny Kaushal waa midka kaa yaabsan doono filimkan lana siiyay door wacan oo isaga ku filan filimkana xiiso gaar ah u yeelay sidoo kalena dhamaan jilaaya kale ee kasoo muuqdeen mid walbo filimka micno ayuu u sameenayaa.
Gunaanad: Gold waa filim si qurux badan la isugu daba riday fariin ahaan, Akshay Kumar oo la yimid hogaamin taariikhi ah, dhamaan jilaayaasha filimkan oo kaalintooda kasoo baxeen, fariinta oo mid qiiro badan ah sidoo kalena taabaneyso qof walbo oo Hindi ah sidaa darteed Gold sida uu magaciisa dahab u yahay ayuu Boxoffice-kana dahab kaga noqon doonaa!!!
Fadlan hoos ka daawo goos gooska filimka Gold adigaaba ka heli doontid: